Uhlelo nogqozi kwabasebenzi: eziphikisanayo.
Ibhizinisi, Ukuphathwa Kwengcbo Yabantu
Imisebenzi noma iyiphi inkampani kuxhomeke endleleni athuthukiswe kahle isimiso izisebenzi nogqozi bese ulandela ukulandelana ekwenzeni lokho okuhleliwe. Too abaphathi abaningi bakholelwa ukuthi izinzuzo ngaphezulu kanye nemivuzo bayoba ukunikeza isisebenzi, siyoba sikhulu isisusa sakhe emsebenzini. Kwakamuva nabasebenzi bocwaningo Recruitment Agency luye lwabonisa ukuthi isimo Kuthi ezahlukene. Basuke neshaya ngokwesayensi kungase kutholakale ukuthi yiluphi uhlelo kwabasebenzi ugqozi umsebenzi uqukethe zango eziningi kumele kunakwe lapho ukuklama ikhanda lika inqubomgomo izisebenzi kwenhlangano.
Zonke kokuvusayo ukuphumula isici womuntu. Bazama ukuhlonza ezingaba ezifihliwe abasebenzi kanye nokuthuthukiswa izinyathelo manje ukuze kuqondiswe lo mthombo ukuze kuzuze inkampani, kuka ukuze uyinike ukukhula njalo okusezingeni eliphezulu inzuzo. Zonke nobunzima ekwakheni uhlelo nokuhlolwa efanele amandla kwabasebenzi kanye nesidingo acabangele nezinye izinto ezithinta isifiso somuntu ukuze zithole imiphumela. UBill Gates bathi uma corporation uyophuma udondolo lwakhe 20 core, yena ongamemezela ucabanga ngesibindi. Ngakho, uhlelo izisebenzi ugqozi akufanele kuphela ngokwezimali futhi kuvuze emphakathini bonke abasebenzi, kodwa ikakhulukazi ukuhlukanisa phakathi kwabo isixhumanisi main, okuzokwenza ukuletha inzuzo esiphezulu.
Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi inkampani nhlobo izinto kokungathathi hlangothi ukuthi ngeke kuthinte indlela izisebenzi ezisebenza ngayo. Konke iyatholakala kungenzeka zishukumise noma uhlamvu demotivating. Kususelwa kule mqondo, umphathi kumelwe simondzawo emhlabeni abasebenzi, okwakuyoholela sikhuthaze kakhulu komsebenzi wabo futhi nentuthuko yomuntu siqu. Ihhovisi kumele avele zobuchwepheshe, ulahlekile izinto ephazamisayo, banamathele ngokuqinile yokugqoka. Kodwa lokhu akuqinisekisi ukuthi ukwanda abasebenzi ugqozi uyohlale zenzeka ngaphandle glitches. Zonke izizathu waphinda waba isici womuntu. Ngisho ethembisayo, okungenzeka ukuthi ngesinye isikhashana baphelelwe isithakazelo ibhizinisi lapho njengoba esethembise umshado. Isizathu salokhu kungaba ushintsho ekuphileni kwakho siqu, rethinking amagugu. Kulokhu, iyiphi yezindlela kwabasebenzi ugqozi ngeke babe neminye imiphumela.
Kususelwa bonke ngenhla, uhlelo izisebenzi nogqozi kufanele sisekelwe hhayi kuphela hhayi eliningi eziyinkimbinkimbi ekhuthazayo - senzo ngenkani, kodwa ngaphezu kwakho konke ekuboneni izidingo sangaphakathi umsebenzi. Kuyadingeka ukuba sihlanganise imigomo siqu nezinjongo inhlangano lapho usebenzela. Umuntu akumelwe uzizwe ukubaluleka kwalokho uveza. Kuphela impumelelo yabo, okuyinto banikwa kuye kuye ngebutho ezithile, kuyoba kubalulekile kuye futhi kuyoba isizathu ukuqhubeka.
Enye imfanelo isihibe ugqozi ngempumelelo Kuyaphawuleka ukuthi isisebenzi esithile emsebenzini wabo wokuziphilisa ifinyelela esiphezulu kule nkampani, "eba" ke. Umholi, owadala zonke izimo ekukhuleni kwakhe nokomuntu siqu phetho isisebenzi esiyigugu, kuvele ulahlekelwa. Ukuze ugweme lesi simo, ochwepheshe ukweluleka waphinda izidingo isisebenzi ukuletha ubuhlobo baso ukuphathwa ezingeni elisha, waliguqula wawayisa ngokubambisana. Lokhu kuzosiza ugcine ezibalulekile umuntu yenkampani esikhundleni sakhe.
Ukudala uhlelo ugqozi - lena ibhizinisi odinga izisebenzi eziningi, ezidinga ulwazi lobuchwepheshe Psychology, ezomnotho, ukucabanga amasu. Ngisho nalapho zonke zimo abangu saveza, kungaba njalo zenzeka isimo esingalindelekile. Lokhu kungenxa kwenani isici womuntu, abenza izenzo ngezinye izikhathi ayikwazi ukulawulwa.
Isayensi kuqinisekisa: ngobuchule kuka abantu, yilapho bezibona khona ukuthi uphazamisekile emsebenzini
Izinhlobo ugqozi yezisebenzi essence yayo futhi izici
Ukuhlela amashifu: isampuli. I-oda ukushintsha isimiso shift: isampula
Collegiality - lokhu ... Ukuphathwa Kwezidingongqangi
Ihhotela "Edene": ingqalasizinda, indawo, amanani, ukubuyekezwa
Dolma East. gourmet Recipe
Uyini izesekeli futhi bayini?
Processor yesihlanu Core i5: izici ukuqhathanisa. Umbadlana for Intel Core i5
Isimiso sezwe uCopernicus. Ingqikithi uhlelo heliocentric zomhlaba. Ptolemaic
Ebusika ukugijima, efana ehlobo